Utatu naMoksha: 2 Inonakidza Mamwe MaDesktop Mamiriro ezvinhu Kubva kuLinux
Utatu naMoksha: 2 Inonakidza Mamwe MaDesktop Mamiriro
Linux Tumira Kuisa | | Chitarisiko / Kuita munhu, Applications
Kuenderera mberi nhevedzano yezvinyorwa zvedu pa Nzvimbo dzeDesktop iripo pane yedu yakawanda uye inokura GNU / Linux Distros, ikozvino yave nguva ye2 isingazivikanwe kana inozivikanwa, inonzi Utatu y Moksha.
Ose ari mabviro (forogo) ye yekare Nzvimbo dzeDesktop zvave zvipi kuvandudzwa kuenderera mberi nekushanda pane mamwe GNU / Linux Distros kana akati wandei, kunyanya kuitira kuti vatore mukana wezvavanogona, maererano ne yakaderera zviwanikwa kushandiswa (RAM, CPU).
Sezvataona, mikana yakafara zvine chekuita nekushandisa 1 kana anopfuura Enzvimbo dzeDesktop pane edu GNU / Linux Maitiro Ekushandisa. Parizvino, isu takaongorora izvo zvinozivikanwa kana zvepasireseGNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, MATE, LXDE y LXQT, uye vamwe vasingazivikanwe zvakanyanya, asi sezvazvino uye zvinoshanda (Deepin, Pantheon y Budgie).
Uye kunyangwe, tichiverenga izvi Yapfuura 10 Desktop Nharaunda, pamwe Utatu y Moksha, kuchine zvimwe zvinonakidza zvakaenzana kana kurova kuziva, kuongorora uye / kana kuyedza.
1 Utatu neMoksha: Nzvimbo dzeDesktop
1.1 Trinity Desktop Environment
1.1.2 Mhando huru
1.2 Moksha Desktop
Utatu neMoksha: Nzvimbo dzeDesktop
El Desktop Nzvimbo akadanwa Trinity Desktop Environment (TDE) zvinoenderana neVagadziri vayo, yakasikwa uye inochengetwa nechinangwa chikuru chekuchengetedza mashandiro uye chinoonekwa cheakare mahara uye akavhurika Ekushandisa Masystem.
Kunyanya, TDE inotsvaga kupa uye / kana kupa iyo Desktop Nzvimbo:
Usachinja-chinja uye zvikuru customizable.
Yakagadzirirwa muunganidzwa wakakodzera wezvinyorwa izvo zvichiri kuenderana neyakare Hardware.
Iyo inoteerera kune yekare Hardware uye inoenderana neiyo nyowani Hardware.
Izvo inotsigira 3D kumhanyisa, asi haidi kuti ishande, pamwe ne freedesktop.org uye Linux file system hierarchy zviyero, uye nedzimwe nharaunda dze desktop.
Inokwanisa kuburitsa yakanyanya HCI (Yemunhu-Komputa Kubatana) kugona mune mbeva / keyboard nharaunda.
Pakati pehunhu hunoita iyo TDE inogona kutaurwa:
Iyo yechinyakare pani, taskbar, maneja webasa, uye nekukurumidza kuvhurwa kwekushandisa.
Iyo yekuchengetera inoenderana software kunyorera, kusanganisira akasiyana mameseji edhita, maneja maneja, vataridzi vemifananidzo, hofisi kunyorera, maneja maneja, uye yekutanga uye yakavandudzwa Amarok classical mumhanzi mutambi.
Yakagadziridzwa login uye desktop kukiya dialogs.
Yekuzvitsaurira DBUS ziviso mutengi yakavandudzwa kuvandudza kusangana pamwe kwakajairika kunyorera seFirefox uye NetworkManager (hapana kudikanwa kweHAL)
TDE yakatanga sekuenderera kwe K Desktop Nzvimbo (KDE) vhezheni 3. Zita re Utatu (Trinidad, muchiSpanish) muchidimbu, nekuti izwi rinoreva "Vatatu" uye TDE kwaive kuenderera kwe KDE 3. TDE ikozvino chirongwa chako Desktop Nzvimbo yemakomputa. Iyo purojekiti TDE yakavambwa uye inoenderera ichimhanyiswa Timothy Pearson, ndiani ane hunyanzvi ane hunyanzvi hwekugadzira software, aimbove murongi we KDE 3.x kubva kushanduro dzakapfuura dze Kubuntu.
TDE haina kuuya mune yakatarwa Distro senge Desktop Nzvimbo default, asi inogona kuwanikwa yeDistros se Altlinux, Exe GNU / Linux, PCLinuxOS, Q4OS, usimbe uye dzimwe shanduro dze Ubuntu. Zvakare, parizvino iri kuenda kune vhezheni R14.0.7 iyo yakaburitswa musi wa30 / 12/2019. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve TDE unogona kushanyira yako zviri pamutemo webhusaiti Mune inotevera chinongedzo.
El Desktop Nzvimbo akadanwa Moksha Desktop (MD) Zvinoenderana neVagadziri vayo, yakagadzirwa uye inochengetwa nechinangwa chikuru chekuchengetedza zviitwa uye chinoonekwa cheWindows Manager. Kujekeserwa 17 (E17) iyo inowanzo kutarisirwa se Desktop Nzvimbo. Nenzira yakadaro, kuigadzirisa, kuivandudza, kuimutsiridza uye kuita kuti ienderane nezvimiro zvenguva yemberi shanduro dze Chiedza, pamwe nekubvisa pazviri, hafu-yakapera kana yakaputswa zvinhu izvo iyo E17 mukati.
Kunyanya, MD inotsvaga kupa uye / kana kupa iyo Desktop Nzvimbo:
Iite kuenderera kweE17 pamwe neshanduko, kugadzirisa uye kugadzirisa kwakaitwa paBodhi GNU / Linux, inova iyo Distro kwayakagadziriswa.
Izvi zvinosanganisira zvimwe zvezvakanakisa, zvemazuva ano, uye zvinonyanya kukosha maficha E18 neE19. Zvakare, zvimwe zvinhu zvitsva izvo timu yekusimudzira inofunga zvinobatsira kugadzirisa iyo yekupedzisira-mushandisi ruzivo.
Iva wakatsiga kupfuura apashure vhezheni dzeChiedza uye shandisa zvishoma RAM kuti ishande.
Iva Desktop inoenderana neese Linux-based mapuratifomu, kupfuura amai vayo Distro, Bodhi GNU / Linux.
Zvisinei, MD nekuti ikozvino inongotsigirwa zviri nyore mu DHEBHANI 8 (Jessie), Chero bedzi mushambadzi wayo asingakwanise kuvandudza pasuru yake kuti ienderane nedzimwe shanduro dzemazuva ano DEBIAN GNU / Linux. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve MD unogona kushanyira kwake zviri pamutemo webhusaiti Mune inotevera chinongedzo.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «Trinity y Moksha», 2 «Entornos de Escritorio» imwe nzira uye inonakidza, kuti mune yavo «Distros GNU/Linux» native kana kutumirwa kune vamwe vanozivikanwa se «DEBIAN GNU/Linux» inogona kubatsira zvakanyanya mune dzimwe nguva, kunyanya mumunda we zviwanikwa zvekushandisa kuchengetedza, ive yekunakidzwa uye yekushandisa, yeiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Utatu naMoksha: 2 Inonakidza Mamwe MaDesktop Mamiriro
Iyo nyowani vhezheni yeApache CouchDB 3.0 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
DragonFlyBSD 5.8 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwe DRM, virtual memory uye nezvimwe